Hiran State - News: Doorashadu wey dhaceysaa ka hor bisha 8aad afhayeenka baarlamaanka Shariif Hasan
Doorashadu wey dhaceysaa ka hor bisha 8aad afhayeenka baarlamaanka Shariif Hasan
Mogdisho:–Shariif Hasan Shiikh Adan oo ah afhayeenka baarlamaanka Somaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in la qabto doorasho inta aan la gaarin bisha 8aad oo uu sheegay inuu ku egyahay xiliga dowlada kumeel gaarka ah ee Soomaaliya.
Shariif Xasan mar uu la hadlayey idaacada VOA waxuu yiri
"Waxaa naga go'an in doorasho la qabto inta aan la gaarin bisha 8aad ee sanadkan oo uusan mugdi ku jirin in xiliga xukuumada uu ku egyahay," afhayeenka oo intaas ku daray in gudiga doorashooyinka ee uu isagu magacaabay ay yihiin kuwo sharciga waafaqsan.
Aniga iyo Shiikh Shariif ma jiro qilaaf shaqsi ah oo naga dhaxeeya ayuu ku jawaabay mar la weydiiyey qilaafka labada masuul oo sheegay iney ku kala aragti duwan siyaasada oo waxa leysku heysto tahay waqti kordhinta iyo wax la mid ah waxuuna yiri.
"Wax walba waa laga heshiin karaa, balse waa in marka hore la aqoonsado xiliga uu kororsaday baarlamaanka," ayuu carabka ku dhajiyay Shariif Xasan oo sheegay inuusan waxba ka qabin in xukuumada iyo baarlamaanka ay wadahadlaan.Afhayeenka baarlamaanka ayaa sheegay inaysan jirin cid beddeli karta mudada sadexda sano ee uu baarlamaanku ku darsaday, waxaana isbedel lagu sameyn karaa marka waqtigeeda la gaaro ayuu sii raaciyey hadalkiisa.
Dalka Somaliya oo ay shacabkiisu ku jiraan masiibo ay abuureen qaar bulshada ka mid ah ayaa lagu wadaa in mudo 21 sano kedib ay hada u muuqdaan wadan ay shacbakiisu ka bixi doonaan kumeel gaarka waa hadii maskax caafimaad qabto loo helo.
· admin on May 11 2011 12:00:02 · 0 Comments · 1661 Reads ·
14,569,689 unique visits